? အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသား ကိုလင်းပိုင်စိုး စစ်ကြောရေးတွင် သေဆုံး - Voice Of Burma
? အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသား ကိုလင်းပိုင်စိုး စစ်ကြောရေးတွင် သေဆုံး
ကိုလင်းပိုင်စိုးနှင့် နီးစပ်သည့် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှ ကျောင်းသားတဦးက “ကိုလင်းပိုင်စိုး ဆုံးတယ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ မနေ့ကမှ သိရတာပါ၊
ဒီလဆန်း ၁ ရက်နေ့ ဖမ်းခံရပြီး နောက်တရက်မှာပဲ ဆုံးသွားခဲ့တာလို့ သိရတယ်၊ သူ့က လူမျိုးခြားဖြစ်နေလို့ ဝိုင်းရိုက်ကြတာ၊ စစ်ကြောရေးမှာပဲ ဆုံးတာလို့ သိရတယ်၊ ကိုလင်းပိုင်စိုးကို မန္တလေး အိုးဖိုထောင် ပို့ခဲ့တယ်ဆိုတာ စစ်တပ်ကလိမ်ခဲ့တာပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကိုလင်းပိုင်စိုး၏ မိတ်ဆွေ တဦး က “အကြမ်းဖက် ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ရဲ့ လူမဆန် ရက်စက်မှုတွေပဲပေါ့၊ လူတွေကို ဖမ်းတယ်၊ ထောင်ချတယ်ဆိုတာအပြင် အခုဟာက လူကိုသတ်တယ်၊
ပြီးတော့ အလောင်းဖျောက်တဲ့အပြင် သတင်းတွေကိုပါ ဖျောက်ပစ်တာ၊ သူတို့ကို စဖမ်းကတည်းက လူမဆန်စွာ အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားကြတာပဲလေ၊ ကိုလင်းပိုင်စိုး ဆုံးတယ်ဆိုတာကို မိသားစုလည်း သိပြီးပါပြီ” ဟု ပြောသည်။
? ၅၀၅ ပြုတ်သွားလို့ ပျော်ရွင်ပြီးနေမှာမဟုတ်သလို ကျန်ရှိ​နေတဲ့ဖမ်းဆီးခံအနုပညာမောင်နှမတွေ မလွတ်မချင်းအနုပညာအလုပ်တွေပြန်လုပ်မှာမဟုတ်တဲ့ သံသာမိုးသိမ့် ❗
? နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တဦး လူမှားလွှတ်မိသည်ဟုဆိုကာ ပြန်ဖမ်းသွား